Sida loo dar Cinwaan in AVI Faylal ay ku Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
Tutorial waxay kuu keeni doonaa iyada oo loo marayo tallaabooyin dhowr ah oo aad u fudud ku daray subtitles in avi videos . Waxaana sharad ku aadan lahaa raaxaysan filimka haddii aadan fahmin afka waxaa ka mid ah. Habka ugu fiican ee lagu xallinayo dhibaatada waxa ay tahay inaad si fudud ku dari xoogaa yar oo Cinwaan galay filimka. 10 daqiiqo ka hadda, aad xariif kara trick tan iyo u isticmaalaan inta ka hartay noloshaada.
Qaybta 1aad: Sida loo dar subtitles bixi in aad exsiting filimada AVI
Qeybta 2: Sida loo edit subtitles kuu gaar ah oo ku dar in movie AVI
Qaybta 1aad: Sida loo dar subtitles bixi in aad filimada AVI jira
Ka dib helitaanka faylasha Cinwaan ka internet (inta badan files Cinwaan waa la .srt, .ass iyo kordhinta file .ssa.), Waxaan u baahan qalab in ay ku darto Cinwaan in AVI video. Halkan waxaan ku talinaynaa Video Converter Ultimate , kaas oo kaa caawin kara inaad iyada ka samaysaa tallaabooyin wax yar uun. Hadda download, rakibi iyo waxa maamula.
Hoos waxaa ku qoran talaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo shuban subtitles aad jeclaaday inuu filim AVI:
Talaabada 1: Import AVI ama kale video files
Import video files in this Video Converter (Windows 8 taageeray) by jiidayeen video galay interface ama waxaad riixi kartaa "Add Files" badhanka si ay u dajiyaan video files.
Tallaabo 2: Ku dar Cinwaan in avi files
Riix "Edit" button oo aad ka heli doonto suuqa kala video tafatir ah. Tag qaybta "Cinwaan" iyo hubi liiska hoos-hoos Cinwaan. Haddaba video waxaad ku dari kartaa Cinwaan ka your computer, oo ay eegis ah oo ku saabsan suuqa kala tafatir ah. Haddii wax walba si fiican u dhacaan, riix batoonka "OK" si loo xaqiijiyo goobaha iyo xir suuqa kala tafatir ah.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad edit karaa video halkan ay siii, codsanaya saamaynta ama ku daray watermarks.
Intii aanay, waxaad dooran kartaa qaab saarka tarin liiska qaabka wax soo saarka, haddii aad rabto in aad loo ilaalin AVI videos aad qaabab kale. Hadda, kaliya riix "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta video. Taasi waa. File The Cinwaan lagu dari doonaa video wax soo saarka.
Kaliya xoogaa tallaabooyin la Video Converter (Windows 8 taageeray), waxaad ku dari kartaa Cinwaan in avi videos. Taasi waa mid fudud oo si sahlan loogu talagalay qof kasta. Si aad u ogaatid faahfaahin dheeraad ah, waxaad tagi kartaa ka Guide User of Video Converter .
Waxaad kaloo ka eegi kartaa hoos ku tutorial video ah:
Qeybta 2: Sida loo edit subtitles kuu gaar ah oo ku dar in avi movie
Waxaad sidoo kale abuuri kartaa file subtiltes oo idinka mid ah in aad ku darto oo aad movie AVI. Si tan loo sameeyo, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Sidaa daraadeed, waxaad dooran kartaa khayraadka text hodan iyo waxa ka codsan in aad video in hal mouse click. Waa maxay dheeraad ah, subtitles loogu talo galay ka dhigi doonaa video cajiib ah oo u gaar ah.
Isku day Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) lacag la'aan ah hadda:
Barnaamijkan waxa cross-madal, oo hoos ku hage qaadataa version Windows si ay u muujiyaan sida subtitles in lagu daro in movie AVI. Haddii aad rabto in aad ku gubi subtitles in AVI video on Mac, kaliya download version Mac in ay sidaas oo kale sameeyaan.
Talaabada 1: dejinta asalka AVI video
Ka dib marka aad abuurtaan barnaamijkan, iyo dooro "16: 9" ama "4: 3" muuqa oo taga si "Mode Feature Full", waxaad u timid doonaa xagga daaqaddii aad u dareen hoose, muujiyey sida hoos. Si aad u dajiyaan ilaha movie AVI, guji "Import" xitaa folder file aad kombiyuutarka ama si toos ah jiidi AVI videos aad ay suuqa kala hoose. Ayaa ku raran yihiin video clips ku tusi doonaa sida thumbnails in shayga saxaarad bidix. Marka aad ku darto files oo dhan, jiididda iyo iyaga hoos u ka mid Timeline video ah oo ay ka mid.
Tallaabo 2: Ku dar subtitles in AVI video oo dheeraad ah u astaysto
Guji "Text" tab kor ku xusan Jadwalka ah, iyo soo qaado template aad jeceshahay in meesha aad rabto in aad ku darto. Isla markiiba, waxaa jiri doona thumbnail qoraalka "T" ah. Xuquuqda waxaa guji dooro "Edit" oo ku menu pop-up ah. Hadda waxaad ku qor karaa ereyadaada kuu gaarka ah, isbedel lagu font, midabka, zoom dhigay gudaha / dibedda saamayn, iyo in ka badan.
A dhinac-ilaa-dhinac previewing uu furmo suuqa waa availble in Eebe idin arkaan saameynta-waqtiga dhabta ah. Intaas waxaa sii dheer, in aad qabsato karaa Timeline A ee Zoomer si loo helo meesha aad si sax ah u doonayaan.
Ka dib markii in, guji laabto dib u furmo suuqa hoose ka heli, iyo jiidi duration ciyaareed qoraalka si ay u hagaagsan aad video for.
Talaabada 3: dhoofinta abuurkiinna
Marka aad ku qanacsan resut finalka, si fudud ku dhacay "Abuur" si loo badbaadiyo a movie AVI cusub oo aad subtitles Added. In uu furmo suuqa wax soo saarka oo u muuqata, waxaad dooran kartaa ka varity ka mid ah fursadaha. Tusaale ahaan, dooro "AVI" ka "Qaabka" tab, ama soo qaado horena u qaybiyay sida "Zune" hoos "Device" category.
Hadda waxaad baratay laba hab oo ay gubaan subtitles in AVI video in idinka badbaadin doonaa waqti badan iyo dadaal. Ka hadda bilowday. Haddii wax su'aalo ah, fadlan ii soo sheeg in comment ah.
> Resource > Video > Sida loo dar Cinwaan in AVI Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)